तेरो हिम्मत छ भने नेपालमा आएर देखा – प्रकाश चन्द – NepalajaMedia
January 3, 2021 89
केही बर्ष यता ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न हिं’सा’त्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उक्त समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सो पार्टीका अधिकांश नेता पछिल्लो समय लगभग भूमिगत छन्। उक्त पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका छोरा प्रकाश चन्द भने केहि समय अगाडी चितवनको एक चिकित्साशास्त्र कलेजमा एमबीबीएसको पढाइ पूरा गरेका छन्।
उनलाई चाहिँ उनको बुवाको नेतृत्वमा रहेको सङ्गठनले गरेका गतिविधि कस्तो लाग्दैछ? यो धेरै पुरानो र पहिलेका कुरासँग जोडिएको छ। बाल्यकालसँग पनि जोडिएको छ।
१० वर्षे द्व’न्द्व’कालमा देखेको चित्र र म आफैँले भोगेको पी’डा पनि छ। त्यो बेलामा रोल्पामा हजारौँ कमरेडहरूले आफ्नै आँखा अगाडि दिएको ब’लिदान र क्रान्तिले त्यतिखेर भोग्नु परेको क्ष’ति- यिनै विषयले मलाई कता कता प्रोत्साहन पनि दियो र पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यतिखेर नै लागेको थियो।
हामीले ठूलो क्ष’ति बे’होरेका थियौँ। त्यतिखेर यु’द्धमा लाग्ने जनमुक्ति सेनालाई स्वास्थ्य उपचारको सामान्य भन्दा सामान्य विषय नजान्दा धेरै क्षति भएको थियो। त्यसलाई कहीँ न कहीँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्थ्यो र मैले बुवासँग पनि छलफल गरिराख्थेँ। त्यही सिलसिलामा कता कता बाट मिलेर आयो र डाक्टरी पढियो।
यसै क्रममा उनले आफुले नै पढेको अस्पतालका संचालकलाई घि’सा’रेर बाहिर नि’काल्छु भन्दै दिएको अभिब्यक्ति निकै चर्चित भएको थियो । प्रकाशले वि एण्ड सि मेडिकल कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईलाई घि’सारे’र बाहिर निकाल्छु भन्दै दिएको अभिब्यक्ति चर्चित भएको थियो ।
प्रकाशले प्रसाईलाई मेडिकल माफिया भनेपछि उनीहरुबीच वि’वाद चु’लिएको थियो । उनीहरुबीचको टेलिफोन वार्ता सार्वजनिक भएपछि उनी वि’वाद बढेको हो । यसैबीच प्रकाशलाई भारतीय टेलिफोन नम्बरवाट हिन्दी बोल्ने मानिसले ध’ म्की दिएका छन् । हिन्दी बोल्ने ब्यक्तिले दुर्गालाई त’र्साउन खोजेको भन्दै ध ‘म्की दिएको सुनिन्छ । टेलिफोन गरेर ति हिन्दी बोल्ने ब्यक्तिले दुर्गालाई किन दुख दिन्छन् ? भन्दै धम् की दिएको सुनिन्छ ।
प्रकाशले पनि ति ब्यक्तिलाई भारतवाट फोन गरेर मलाई ध म्की दिने ? तेरो हि’म्मत छ भने नेपालमा आएर केही गरेर देखा न भन्दै जवाफ दिएको टेलिफोनमा सुनिन्छ । त्यो अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रकाश चन्दलाई फोन आएको नम्बरमा फेरी संचारकर्मीले फोन गर्दा फोन अफ भएको देखिन्छ । दुई दिन सम्म पनि त्यो नम्बर अफ भएको देखिन्छ ।
आलोचना गर्नका लागि गरिने विषयहरूमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर हाम्रो बाल्यकाल हेर्नूस् – हामी कस्तो खालको भोगाइबाट गुज्रिएका छौँ र कस्तो खालको शिक्षादिक्षाबाट अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा सबै युवाले बुझ्न जरूरी छ।
अहिले जुन विषय आएका छन् आफ्ना छोराछोरी पढाउने अरूको छोराछोरी मार्न लगाउने भन्ने – खास विषय त्यो होइन। हामी पनि वा म पनि क्रान्तिको मैदानमा हुनेछु।
त्यो विषय कहाँबाट आयो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी हुन्छ। जुन ‘हार्ले डेभिडसन’ मोटर साईकलको कुरा हो, काठमाण्डूमा सामान्य पार्किङ्ग गरी राखेको अवस्थामा मैले चढेर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालेको थिएँ। त्यो आजको कुरा पनि होइन, करिब २/३ वर्ष अगाडिको कुरा हो।
Prevकालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याएर छाड्छु : प्रधानमन्त्री ओली
Nextप्रधानमन्त्रीका पाँच दाबी, पाँच झुठ